संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन ! – अभियान खबर
संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन !
काठमाडौँ –सङ्घीय संसद्का दुबै सदनका सदस्यको प्रतिनिधित्व रहने संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन भएको छ । संविधानको प्रावधान अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिपूर्वको सुनुवाइका लागि समिति गठनको प्रावधान छ । संविधानको प्रावधान अनुसार सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले समितिमा रहने १२ सदस्यको मनोनयन गरेको हो । राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधित्व हुने तीन सदस्य भने गत शुक्रबार नै मनोनित भइसकेका छन् । संयुक्त नियमावली पारित भएको करिब तीन सातापछि समिति गठन भएको हो ।
संविधान अनुसार गठन हुने समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य र राजदूतको नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नेछ । समिति गठन नहुँदा सर्वोच्चका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइ प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
सोमबार गठित समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट दुई सदनका नौ सदस्य रहनुभएको छ । जसमा प्रतिनिधिसभाबाट सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, अमृता थापामगर, नीरुदेवी पाल, पार्वत गुरुङ, पूर्णकुमारी सुवेदी र शिवकुमार मण्डल हुनुहुन्छ । यस्तै राष्ट्रियसभाबाट सुमनराज प्याकुरेल र नन्दा चपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ ।
यस्तै, नेपाली काँग्रेसबाट समितिमा चार सदस्यको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जसमा प्रतिनिधिसभाबाट भीमसेनदास प्रधान, पुष्पा भुसाल र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहनुभएको छ । काँग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभाबाट जितेन्द्रनारायण देवले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाबाट अन्य दलको सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधित्व छैन । प्रतिनिधिसभाबाट भने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । समितिमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्णले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ । गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मुुटुको चालमा गडबडी
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण होला त र्कायन्वयन?